Turkish Turkish Dreamliner maka ọgbọ na-esote Business Class - RayHaber | raillynews
[17 / 01 / 2020] Ationgbọ njem dị ọcha na Ankara	06 Ankara
[17 / 01 / 2020] Ndebanye aha maka Red Bull Homerun 2020 amalitela	14 Bolu
[17 / 01 / 2020] Mkpa Bursa na 2020 Etinye ego	16 Bursa
[17 / 01 / 2020] İZTAŞIT ebuuru 113 puku ndị njem nọ izu abụọ mbụ	35 Izmir
[17 / 01 / 2020] TCDD Kwuru iji hazie njem njem	06 Ankara
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraTurkish Turkish Dreamliner maka Ọzụzụ Ahịa Ọhụụ
02 / 12 / 2019 06 Ankara, Central Anatolia Region, General, Ụgbọelu, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Turkey, VIDEO
Turkish Turkish Dreamliner
Turkish ụgbọelu Dreamliner maka klas azụmaahịa ọhụrụ; Boeing 787-9 nwere ogologo, engine ejima na ahụ buru ibu makwaraara dị ka Dreamliner. N'ihi nnukwu ihe mejupụtara ya, ụgbọ elu ahụ nwere oke iru mmiri ma na-enye njem dị mma ruo na njedebe. You ga-achọpụta na Boeing 787-9 nwere nnukwu windo buru ibu karịa ụgbọ elu ndị ọzọ na-agafe agafe, ị ga-ahụkwa ịdị obosara nke gburugburu. Can nwere ike zuru ike na oche ndị dị na ụlọ ụlọ azụmahịa, nke enwere ike ịgbanwe ka ọ bụrụ akwa dị mma nke nwere ohere buru ibu.
Anyị emegharịala ọgbọ ọhụrụ nke ụgbọelu Boeing 787-9 nke nwere nnukwu ọrụ iji jeere gị ozi. Anyi achoro ime ka njem gi nwekwuo obi uto na uzo nke oche, ogwe oche di obosara, ngwa ndi n’eme ka iru ala di n’elu oche, ebe a na anoghi echekwa, USB na ọdụ ugbo mmiri. Na mgbakwunye, anyị ekepụtala ihe eji achọ mma n'anya gị nke nwere ihe ịchọ mma nke dabara na njiri mara Flow-Flow.
Abụ onye njem klas azụmahịa na Dreamliner bụ ahụmịhe dị iche
Will ga enwe ahụ iru ala maka oghere ikpere nke 1 cm nke oche 2-1-111 na-enye n'ụlọ klas Business. You nwekwara ike ịtụgharị oche gị n’ihe ndina dị ogologo nke 193 cm jiri otu pịa. Eserese nke 18-inch na-akpọ gị oku ka ị bịa njem dị ụtọ na fim, usoro na egwu kachasị mma.
Na Klaasị Azụmaahịa, anyị na-enye ọbụna nkọwa kachasị mma dịka njikwa mmetụ, ọkụ ọkụ na-agbanwe agbanwe na-agụ ọkụ, mpaghara nchekwa nwere mkpuchi, ngalaba ike na ọdụ ụgbọ mmiri USB. Anyị na-akpọ gị oku ka ị bịa na njem nlegharị anya na özel Sunrise na Cappadocia ”ọkụ ndị akọwapụtara maka kabọt ahụ.
Boeing 787-9 na-ekwe nkwa njem nke mezuru atụmanya gị
Jikere maka ịnwe njem dị mma na oche ndị sara mbara nke 3 cm, nke edepụtara na kọlụm Economy Class dị ka 3-3-44. Anyị etinyegoro anya ikpere 78 cm n'etiti oche Economy klas iji gaa nke ọma dịka ịchọrọ. Anyị chọrọ ka ị gaa njem obi ụtọ na ụlọ klaasị Economy ebe anyị tinye agba na lightingyla Turquoise Waves ”ọkụ.
Boeing 787-9 nwere windo kachasị ukwuu ma e jiri ya tụnyere klas nke ụgbọ elu ma gbatịkwuo njem ahụ.
Njem a na-atụgharị uche
A ga-agbanwe oche ndị dị na ụlọ ụlọ achụmnta ego dị ka akwa dị mma na nke dị mma n'ihi oghere ndị edobere.
Oche pụrụ iche
Ngwa anyi na ebili n’azi oche oche Aurora ız yiri edem-ututu oma. Oche oche anyị abụọ emepụtara ọhụrụ na-enye ndị njem anyị ohere pụrụ iche.
A malitere Ịmalite Ije Ozi Ọhụụ nke Turkish Airlines na Mmetụta Dị Oké Mkpa
Igosi Ego Iche: Ndi njem n’agba ugbo ala nke Ogba ugboala di elu
Nkwekọrịta Mgbapụta: Ịzụta Ngwakọta Ngwakọta ka a ga-enye ndị njem na YHT Business Class Wagons
Nkwekọrịta mgbasa ozi: Ịzụta ngwongwo nri iji nye ndị njem na YHT Business Class Wagons
Ngwa ngwa azụmahịa na steeti ndị China
Ebube ọgbọ ọhụrụ n'ọgbọ ọhụrụ site na TÜDEMSAŞ
Ebe a na-eri nri na Busıness nke obodo maka ndị njem ụgbọ elu
Onyinye Ụlọ Ahịa Pụrụ Iche nke Montania maka Nzukọ Kasị Mma
Transportgbọ njem Istanbul maka mmepe na mmepụta nke ụgbọ ala LRV ọgbọ ọhụrụ…
Flightsgbọ elu Boeing 787-9
İZTAŞIT ebuuru 113 puku ndị njem nọ izu abụọ mbụ
TCDD Kwuru iji hazie njem njem
71 Mbelata pasent nke ndị mmadụ tụfuru n'ihe ọghọm okporo ụzọ
Turkey Ga-lọjistik ebe oria a kachaa nke Silk Road
N'Ụzọ Kwekọrọ Ndú nke njem na Turkey EMİTT 2020
Etibukart Queue Na Ngwakọta ahia ahia ahia